HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaYenişehir Osmaneli Joojinta Xawaare Sare ee Xawaare Sare Joogsi intee leeg ayaa dib u dhaca mashruucan? ..
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY 0
Xaqiiqdii, sürpriz layaab kuuma ahan kuwa sida dhow ula socda. Marka la eego, joojinta hindisada aan shalay soo gudbinay waxaa loo arkaa natiijo la saadaaliyay.
TCDD 3 Tender for Bursa-Osmaneli Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Abriil 2018. Kaabayaasha, howlaha kaabayaasha ee udhaxeeya Bursa-Yenişehir iyo superstructure iyo shaqooyinka elektarooniga ah ee udhaxeeya Yenişehir-Osmaneli iyo kaabayaasha, superstructure-ka iyo shaqooyinka korontada ku shaqeeya ayaa helay qandaraaska.
Bixinta ugufiican ee 2 bilyan 520 milyan oo ginni ah ayaa siisay Aga Energy. Si kastaba ha noqotee, bishii Juunyo, Kooxda Dhismaha Bayburt waxay ku guuleysteen isla qiime kan.
Bayburt ma aha shirkad shisheeye. Tunelada 6 ee gobolka Mezitler ee Ankara waxaa dhistay Bayburt sanado kahor. Goobta dhismaha, maamulayaasha shirkadu waxay noo sheegeen inay qabteen qayb kamid ah wadada tareenka ee Kars-Baku-Tbilisi.
Sababtaa awgeed O
Waxaan u aragnay inay tahay wax fiican in shirkada tareenka khibrad leh ay qaadatay dhamaan tareenka xawaaraha sare ku socda.
Si kastaba ha ahaatee
Isla markii lagu dhawaaqay hindisada, dhibaatooyin dhaqaale ayaa kacay. Markuu lacagtu isbeddelay oo Doolarku kaco, qiimaha xaraashka 2.5 bilyan ee xaraashka ah wuxuu ka sarreeyay bilyan 4.
Si kale haddii loo dhigo, markii qiimuhu kor ugu kacay heer aan la saadaalin karin, qandaraasluhu ma uusan dooneyn inuu shaqo bilaabo. Caadi ahaan, hindise-bixiyuhu ma uusan keenin meeshii.
Akhristayaasha joogtada ah ee tiirarkaani waxay akhriyaan in "tareenkayaga xawaaraha dheereeya uu ku kaydsan yahay keydin" iyo in mashruucan la joojiyay. Dhanka kale, kuwa aan luminin rajadii duulimaadka tijaabada ah ee loo yaqaan 'Newene edler' waxay ka bilowdaan 2019 üler waxay ku shubeen fikirradooda xariiqda.
14 Sebtember Sida of 2019, waxaan ku dhawaaqnay in la tirtiray hindise 3 April ee tiirarkaasi shalay. Kuwa daneynaya arrintan, qaasatan rabitaan siyaasadeed, waxay u aqbalaan si lama filaan ah oo ha qarin waxyaabaha la yaabka leh.
Si kastaba ha ahaatee ...
Way iska cadahay inay taasi natiijadaasi horseedi doonto. Sidaa darteed, ma jiraan wax layaab weyn leh.
Nasıl Sidee baajinta qandaraaska u saameyn doontaa mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee Bursa?
Iyadoo la raacayo macluumaadka aan helnay, waxaan dhahnay:
T TCDD waxay kaloo ogaatay in hindisada aan lasoo gabagabeyn karin. Sidaa darteed, u diyaargarowga qandaraas cusub oo leh xaalado cusub ayaa isla markiiba bilaabmaya. ”
Waxaan sidoo kale ku darnay:
"Tareenka dusha sare waxaan dooneynay sanadaha 2023-2025, hadda 1 ama 2 dib ayaa loo dhigi doonaa sanad kale."
Haddii kaalmada ay buuxsamayso, dhibaatada miyaa la xallin doonaa?
Ma nihin farsamoyaqaanno… Waxaan nahay saxafiyiin isku dayaya inaan raacno horumarada oo aan ku wadaagno qeybahaan. Dhanka kale, waxaa jiray asxaab ku idhi rajo wanaagsan oo leh "Gunnada waxaa la siiyaa wax badan, waxaa la dhammeystirey waqti ka hor".
Way saxsanyihiin, laakiin waxaa jira dariiqyo tareennada xawaaraha dheereeya ee Bursa-Osmaneli. 16 kiiloomitir oo wadarta xerooda xNUMX kilomitir u dhexeysa Bursa iyo Yenişehir ayaa la dhisay. Waxaa jira isugeyn isku-xirka kiloomitir 9 oo u dhexeysa Yenişehir iyo Osmaneli.
Oo weliba ...
Haddii wax waliba si hagaagsan ugu socdaan tunnel-ka, ugu badnaan mitir 4 mitir ayaa la qodayaa maalin kasta. Xitaa haddii gunnada oo dhami ay timaado, kuma filna in howsha la dhammeeyo goor hore. (Ahmet Emin Yilmaz - dhacdo)
Ogeysiiska Qandaraaska: Dib-u-habeynta iyo Adeegyada La-talinta ee Yenisehir-Osmaneli iyo Qorshaha Tareenka ee Yenisehir-Bozüyük 21 / 11 / 2014 Akdeniz-Osmaneli iyo Akdeniz-Bozüyük Railway Studies Project iyo Consultancy Services in la helo doono JAMHUURIYADDA GOBOLKA Tareennada ADMINISTRATION MADAXA XAFIISKA (TCDD) General Directorate Akdeniz-Osmaneli iyo Akdeniz-Bozüyük Railway sahan, Project iyo Consulting-talinta ganacsiga adeegyada, si ay u dalbadaan waayo-aragnimo ku filan la musharixiinta ee ku-meel-gaar ah. Natiijooyinka qiimaynta Pre-aqooneed ee aqoonta ka mid ah kuwa ka go'an iyada oo la raacayo qaybgalka diyaar la qodobada dhacdo th Law 4734 No. 5 ku jira By caan sida ay shuruudaha ku qeexan ee sooca ah pre-isreebreebka lagu martiqaadi doonaa in ay dalab liiska gaaban waxaa lagu Abaal marin by nidaamka curdan dhexeeya waxey gaar ah. Nambarka Diiwaangelinta Qandaraaska: Ihale
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Mashruuca Tareenka, hindisaha adeegga mashruuca iyo la-talinta ayaa horay loogu soo doortay 19 / 12 / 2014 TCDD Akdeniz - Osmaneli iyo Akdeniz - Bozüyük Railway Project Study, adeegyada mashruuc iyo latalin ayaa laga soo ururiyey by codsanaya pre-xulashada hindisooyinka Turkish State Tareennada (TCDD) Enterprise Agaasinka Guud, "Akdeniz - Osmaneli iyo Akdeniz - Service Consulting Bozüyük Railway sahan, Project iyo" curdan codsiyada ka hor doorashada 11 Diisembar 2014 ayaa la ururiyey. Sida laga soo xigtay xogta ay heshay Magazine Investments; Shirkadaha codsanaya ka hor doorashooyinka hindisada waa sida soo socota: 1. Altinok Consultancy 2. Arcadis - Allaş Turk 3. Botek 4. Emay Engineering 5. Erka-AS - Koba Eng. 6. Geodata injineer 7. Getinsa - Inpro Müh. 8. Grontmij ...
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Soodhaweynta iyo shirkadaha naqshadeynta ayaa la waydiistay inay soo gudbiyaan hindise-ka-hor-hordhac ah. 19 / 02 / 2015 TCDD Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Mashruuca 20 ayaa la waydiistay in ay ka soo gasho guuleystayaasha xulashada hore ee sahaminta, mashruuca iyo adeegyada la talinta ilaa 2015 11. iyo Dib-u-dhiska Wadada Yenisehir - Bozüyük, Daraasada horudhacidda qiimeynta horudhaca ah ee adeega iyo qorsheynta. Sida laga soo xigtay xogta ay heshay Magazine Investments; Shirkadaha ku guuleystay doorashadii hore ee hindisada ayaa la waydiistay inay dalbasho ilaa 2014 on 20 March 2015. Liiska buuxa ee ku guuleystey waxaa lagu go'aamiyey sida soo socota: 10.00
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Mashruuca Tareenka, hindisaha mashruuca iyo la talinta 26 / 03 / 2015 TCDD Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Mashruuca Tareenka Soo-jeedinta hindisaha baaritaanka, mashruuca iyo la-talinta waxaa la ururiyey. Hantida qandaraaska ugu sareeya ee adeegga waxaa laga soo ururiyay maalinta 11 March 2014. Sida laga soo xigtay xogta ay heshay Magazine Investments; Daraasada qiimaynta kadib, baqshadaha maaliyadeed ee shirkadaha la helo ayaa la furi doonaa. Codbixiyayaasha waxaa lagu go'aamiyay sida soo socota: 20. Altinok Consultancy 2015. Bote Inc. 1. Mescioglu Machadka 2. Protek - Mega Eng. 3. Proyap The ...
Yenisehir-Osmaneli iyo Mashruuca Tareenka ee Yenisehir-Bozuyuk 14 / 05 / 2015 TCDD Akdeniz - Osmaneli iyo Akdeniz - Bozüyük Railway Project Study iyo mashruuca furay baqshadaha dhaqaale ee gundhigga ah ee Turkish State Tareennada (TCDD) Enterprise Agaasinka Guud by qurbaanno maalin 20 March 2015 ururiyey, "Akdeniz - Osmaneli iyo Akdeniz - Bozüyük Railway sahan, Project iyo Consulting Services" baqshadda dhaqaale ee curdan furay maalmood May 08 2015. Sida laga soo xigtay xogta ay heshay Magazine Investments; Qiimaha saxda ah ee dhibcaha farsamo ee shirkadaha baqshadda dhaqaale furay dalab maaliyadeed iyo hindise go'aamiyo sida 8.247.032 (TL) sida soo socota: score Technical 1 bandhigidda dhaqaalaha. Altinok Consultancy 87,12 3.998.000 2. Proyapı Engineering 92,30 5.428.486 3
Ogeysiiska Qandaraaska: Dib-u-habeynta iyo Adeegyada La-talinta ee Yenisehir-Osmaneli iyo Qorshaha Tareenka ee Yenisehir-Bozüyük
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Mashruuca Tareenka, hindisaha adeegga mashruuca iyo la-talinta ayaa horay loogu soo doortay
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Soodhaweynta iyo shirkadaha naqshadeynta ayaa la waydiistay inay soo gudbiyaan hindise-ka-hor-hordhac ah.
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozuyuk Mashruuca Tareenka, hindisaha mashruuca iyo la talinta
Yenisehir-Osmaneli iyo Mashruuca Tareenka ee Yenisehir-Bozuyuk
Yenisehir - Osmaneli iyo Yenisehir - Bozüyük Mashruuca Tareenka iyo hindise mashruuc oo ay fuliyeen UBM Inc. won
Yenisehir - Osmaneli iyo Mashruuca Tareenka ee Yenisehir - Bozüyük UBM A.Ş. qandaraaska saxiixay
Joojinta hindisada ay gaartay JCC Headkentray ayaa ka soo laabtay maxkamadda
Mashruuca TCDD Bandirma - Boosaaso - Ayazma - Osmaneli High Speed ​​Train Project Mashruuc dhaqaale oo hindiseyaal ah oo loogu talagalay adeegyada kormeerka iyo la-talinta ee dhismaha dhismaha dhismaha ee Bursa - Yenisehir ayaa la furay
Mashruuca TCDD Bandirma - Bursa - Ayazma - Osmaneli Project Speed ​​Train Project, Bursa - Yenisehir dhismaha kaabayaasha qaybta dhismaha iyo kormeerka talo bixinta ayaa la filayaa inay ku dambeyn doonaan ansixinta Guddiga Maamulka